Indri > Articles > TOLOKEVITRA IOMBONANA HIATREHANA NY LOZA MITATAO ATERAKY NY AFO
TOLOKEVITRA IOMBONANA HIATREHANA NY LOZA MITATAO ATERAKY NY AFO
Posted on 5 novembre 2021 Categories: Articles No comments yet
Miisa 11 ny ventin-kevitra nivoitra, miendrika fepetra, entina miady amin’ny afo. Izany dia natao ho fanomezana lanja ny asa saina iombonana, notanterahina niaraka tamina vondrona maherin’ny 50 ary mifototra amin’ny singa 4 mazava tsara, nanomboka ny taona 2021. Nozaraina ampahibemaso ny 14 septambra tamin’ny alalin’ny ALAMINO (l’Agora des Paysages et des Forêts de Madagascar), notronin’ny Minisitry ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy, izay nanohana sy nandray anjara mavitrika tamin’ny ezaka.
Misy fiantraikany eo amin’ny mponina sy ny tontolo iainana eto Madagasikara ny doro tanety. Trangan-javatra anisan’ny mbola tsy voafehy tanteraka. Na dia misy aza ireo faritra efa voafehy, dia mbola maro ireo mametraka olana ary miteraka fahasimbana sy miteraka voka-dratsy maro. Manao antso avo amin’ny tsirairay ny Alamino.
RAHA TE HAKA IREO ANTONTAN-KEVITRA MANDRAFITRA IREO FEPETRA
Trangan-javatra mateti-piseho eto Madagasikara ny doro tanety. Mbola lavitr’ezaka ny fifehezana izany. Na dia efa misy aza ireo efa voafehy, dia mbola maro ireo mametraka olana sy miteraka fahasimbana ary misy akony miiba izany.
Lokanady fototra ho an’i Madagasikara ny famahana io olana io. 80 % ny mponina dia mivelona amin’ny fambolena sy fiompiana, manimba ny sahanala, izay iankinan’ny raharaha ny afo. Mampihena ny ala sy ny zavamananaina mivelona aminy, manimba sy mampihena ny tsiron-tany, mandritra ny loharano ary mahakarakaina ny sahanala. Manampy trotraka izany ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny fahantrana. Manaraka izany, mampitombo ny fahalotoan’ny rivotra iainana ny afo, ary an-tapitrisany ny Malagasy mizaka ny vokany isan-taona.
Manoloana ny hamehana, Alamino dia mandroso ireto fepetra manaraka ireto :
Maka bahana ho fiomanana amin’ny hetsika nasionaly
Fanairana ny ambom-po nasionaly mba hahatsapa fa ny afo dia loza mitatao, ka ilana ny fihetsehan’ny mpiray tanindrazana amin’ny alalan’ny fanokanana andro hiadiana amin’ny doro ala manerana ny nosy, ka miompana amin’ny hetsika eny ifotony mba hiarovana ny toeram-mpambolen-kazo sy ny ala, fanaovana hetsika nasionaly ho fanentanana hoan’ireo karazan’olona na vondrona kendrena 5 : tompon’andraiki-panjakana sy manampahefana, vondrom-piarahamonina eny ambanivohitra, mponina an-drenivohitra, mpitatitra sy ny raiamandreny ara-panahy.
Miara-miasa sy mandrindra ireo mpisehatra
Fananganana ivotoerana Nasionaly Aro Afo enti-mandrindra sy manetsika ny mpisehatra isan-tsokajiny. Avondrona ireo mpisehatra, ireo toro sy angombaovao mba hampirindra ny asa ary ampahatsiahivina ireo komity maharitra miady amin’ny afo, indrindra ireo any amin’ny faritra saropady sy mbola ahitana doro tanety sy doro ala, ary hetsehana ny tafika hanohana sy handray anjara amin’ny hetsika.
Fanarahamaso sy fitorohana ny afo
Fanarahamaso sy fitorohana ny fisian’ny afo amin’ny faritra iray amin’ny alalan’ny fanamafisana ny fiambenana ny afo an-tanety (andrimasompokonolona sy ny tilikambo fiambenana), ahafahana mamantatra sy mijery ireo afo mety hitera-doza, fanamafisana ny fanarahamaso amin’ny alalan’ny zanabolana izay ilana ny fitaovana FIRMS NASA, izany koa dia manampy amin’ny fitorohana ny afo sy ny fivoarany isam-paritra. Manampy izany fanarahamaso izany ihany koa ny fampiasana Drone eny amin’ireo faritra voasokajy ho lohalaharana amin’ny fikajiana ny tontolo iainana.
Mifehy sy mamono ny afo
Mifehy sy mamono ny afo amin’ny alalan’ny fametrahana aro afo manara-penitra, indrindra ireo manodidina sy manamorona ireo valanjavaboahary nasionaly sy ny toeram-pambolen-kazo, amin’ny alalan’ny famatsiana sy famokarana fitaovana ho an’ ireo vondrom-piarahamonina ifotony ahafahana mamono ny afo, amin’ny alalan’ny fampiasana angidimby sy ny « bambi bucket », ho laharam-pahamehana ny faritra voasokajy ho lohalaharana amin’ny fikajiana ny tontolo iainana.
Ireo tolokevitra ireo dia vokatry ny atrikasa 7 sy ny resadresaka niarahana tamina mpisehatra miisa 50 isan-tsokajiny. Nandritra io fotoana io no nambaran’i Minisitry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana lovainjafy : “Ireo fepetra atolotra ato anatin’ity antontan-kevitra, izay niarahan’ny Alamino sy ny tenako ary ny ekipa izay tarihiko ity dia mahasahana indrindra ny hodidin’ny Paika Nasionaly ho Fifehezana ny Afo, ary mandray anjara amin’ny fametrahana sy ny fanatanterahana azy, izay iarahana amin’ny mpisehatra isan-tsokajiny.”
Araky ny fanambarana nataon’ireo mpikambana 41 ao amin’ny filan-kevim-pitatanana ao amin’ny Alamino, dia mihena 400 000ha isan-taona ny ala eto Madagasikara ka fotoana ihetsehana izao. Nisafidy lohahevitra efatra maika (4) hanombohana ny asa izy ireo amin’ity taona 2021 ity: fandrindrana ny afo, fambolen-kazo sy fanarenanana ny sahanala, fananan-tany sy drafi-panajariana ny faritra ary ny fanabeazana sy ny fanentanana.
Nitsiry ity asa santatra ity tanatin’ny fanombohana ny Folotaonan’ny Fanarenana ny Rohivoahary ny Firenena Mikambana (2021-2030). Araky ny fanambaran’i Tim Christophersen, mpandrindra ity am-polotaona ity, izay ao anatin’ny fandaharan’asan’ny Firenena Mikambana hoan’ny Tontolo Iainana: “Mba ho fanalefahana ny fahantrana eto Madagasikara dia zava-dehibe ny fiverenan’ny sahanala lonaka sy mamokatra. Mananosarotra ny fanamby satria mitaky ny fanetsehana ny mpisehatra isan-tsokajiny. Mitombina arak’izany ny safidin’ny Alamino izay niompana amin’ny fanomezana lanja ny asa saina iombanana”
Fanampim-panazavana momba ny asa santatra Alamino